ဒိန်ချဉ်ကိုအိမ်မှာပဲ လွယ်လွယ်လုပ်စားကြမယ်။ - For her Myanmar
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေမြင်လိုက်တာနဲ့တင် ဝိုးကနဲဖြစ်သွားစေရမယ် 😛
ဒိန်ချဉ်ကြိုက်တဲ့ ယောင်းယောင်းတွေလက်ညှိုးထောင်! နို့အရသာပျစ်နှစ်နေတဲ့ ဒိန်ချဉ်ကို ထန်းလျက် မွှေးမွှေးလေးနဲ့ တွဲဖက်ပြီးစားလိုက်ရရင်တော့ အာဂပါးစပ် လူဖြစ်ကျိုးနပ်လေငဲ့တို့ ဘာတို့။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆိုင်မှာဝယ်တဲ့ဒိန်ချဉ်တွေကကျ နို့အရသာကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်မစားရဘဲ ဘာလိုလို့ လိုမှန်းမသိ၊ ဒိန်ချဉ်ကောင်းရင်လည်း ထန်းလျက်က မမွှေးတော့ သောက်လို့မကောင်း တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကတော့ စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေရတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘာသာ အိမ်မှာ လုပ်တာအကောင်းဆုံးလို့ ကြွေးကြော်ပြီး ဟိုစမ်းဒီစမ်းလုပ်ရင်းကနေ အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်။
အာ့ကြောင့် အစားကောင်းစားရရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေကို သတိရတယ်ဆိုသလို ဒိန်ချဉ်ကြိုက်တဲ့ ယောင်းယောင်းလေးတို့အတွက် နှင်းရဲ့ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်းနဲ့ ထန်းလျက်ကျိုနည်းကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်လို့။
နွားနို့ (၅၀) သား
Related Article >>> အိမ်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖက်ထုပ်လုပ်စားကြမယ်…
အရင်ဆုံး နွားနို့ ၅၀ သားကို အနံ့မွှေးလာတဲ့အထိ နာနာကျိုလိုက်ပါ။ ကျိုနေတဲ့အချိန်မှာ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ထားပြီး နာနာမွှေပေးပါ။ နွားနို့အနံ့ မွှေးလာတဲ့အခါ မီးဖိုပေါ်က ချပြီး မလိုင်တက်လာတဲ့အထိ ခဏအအေးခံထားပေးပါ။ နည်းနည်းအေးသွားတဲ့အခါ နွားနို့ကိုခွက်တစ်ခွက်စီထဲ ခွဲထည့်ပြီး အပေါ်ယံမှာ ဒိန်ချဉ်တစ်ဇွန်းစီ လိုက်ထည့်ပေးပါ။ ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒိန်ချဉ်တွေကို နွားနို့ထဲ ပျံ့သွားအောင် ခပ်နာနာလေး ခေါက်ပြီး မွှေပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ အခန်းအပူချိန်ထဲမှာပဲ အအေးခံထားလိုက်ပါ။
၄ နာရီလောက်ကြာရင်တော့ ဒိန်ချဉ်လေးခဲသွားပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။ နှင်းကတော့ ခပ်ဆိမ့်ဆိမ့်နဲ့ နွားနို့အရသာအရမ်း ပျောက်မသွားတဲ့ ဒိန်ချဉ်လေးကြိုက်လို့ ၄ နာရီလောက်ပဲ ထားတာ။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့ချဉ်ချဉ်လေးသောက်ချင်ရင်တော့ တစ်ညလောက်ထားပေါ့နော်။ ပြီးတာနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီး ၃ ရက်လောက်ထားပြီး သောက်လို့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ ပျစ်နှစ်နေတဲ့ ဒိန်ချဉ်လေး ရပြီပေါ့နော်။ အသီးကြိုက်တတ်ရင်လည်း အပေါ်ကအသီးလေးတွေတင်ပြီး စားလို့ရပါတယ်။ ကဲ.. ဒိန်ချဉ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ထန်းလျက်ဘက် လှည့်ကြရအောင်..
ထန်းလျက် ကျိုဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ထန်းလျက် နဲ့ ရေပါပဲ။
ထန်းလျက် ၅ ခဲကို ရေမြုပ်ရုံထည့်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ လုံးဝပျစ်သွားတဲ့အထိ ခပ်နာနာလေးကျိုလိုက်ပါ။ ကျိုနေတဲ့ တောက်လျှောက်မှာလည်း မွှေပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ (ဘာလို့လဲဆိုတော့ နှင်းကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ မီးပြင်းရင် တူးတတ်ပြီး မမွှေပေးရင်လည်း အိုးကပ်တတ်လို့ပါ။) ၁၅ မိနစ်လောက်သေချာ ကျိုပြီးရင်တော့ ရပါပြီ။
Related Article >>> ဒိန်ချဉ်ကိုဒီအတိုင်းမစားချင်ရင်
ကဲ ဘယ်လိုလဲ? လွယ်တယ်မလား။ အဲဒီနည်းက နှင်းတို့တရုတ်တန်းရဲ့ နာမည်ကြီးဒိန်ချဉ်ဆိုင်ကနေ ခင်အောင်ပေါင်းပြီး အစ်အောက်မေးထားရတဲ့ နည်းလမ်းပါ။ (ငိငိ အိုင် အကြံပိုင်တယ်မလား :P) ထန်းလျက်ကျိုနည်းကတော့ ကိုယ့်ဘာသာရှာရတာပေါ့နော့်။
ဆိုတော့ နောက်တစ်ခါလုပ်ရင် အပြင်ကနေဝယ်စရာမလိုအောင် ဒီလုပ်ထားတဲ့ဒိန်ချဉ်ထဲကပဲ ခွက်တစ်ဝက်စာလောက် နှုတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပါ။ အကယ်၍ ဒိန်ချဉ်က တအားပျစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ရေလေးနည်းနည်းရောပြီး သောက်ပေါ့။ ပြီးတော့ ဘာဓာတုပစ္စည်းမှလည်း မပါတာမို့ အိမ်မှာရှိတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ယောင်းရဲ့ မိဘဘိုးဖွားတွေလည်း အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ သောက်လို့ရပါတယ်လို့။
ယောင်းတို့ အိမ်မှာလုပ်စားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အဆင်ပြေမပြေ ပြန်ပြောပေးခဲ့ဦးနော်။
ပါဝငျပစ်စညျးတှမွေငျလိုကျတာနဲ့တငျ ဝိုးကနဲဖွဈသှားစရေမယျ 😛
ဒိနျခဉျြကွိုကျတဲ့ ယောငျးယောငျးတှလေကျညှိုးထောငျ! နို့အရသာပဈြနှဈနတေဲ့ ဒိနျခဉျြကို ထနျးလကျြ မှေးမှေးလေးနဲ့ တှဲဖကျပွီးစားလိုကျရရငျတော့ အာဂပါးစပျ လူဖွဈကြိုးနပျလငေဲ့တို့ ဘာတို့။ ဒါပမေဲ့လညျး ဆိုငျမှာဝယျတဲ့ဒိနျခဉျြတှကေကြ နို့အရသာကို ပဈြပဈြနှဈနှဈမစားရဘဲ ဘာလိုလို့ လိုမှနျးမသိ၊ ဒိနျခဉျြကောငျးရငျလညျး ထနျးလကျြက မမှေးတော့ သောကျလို့မကောငျး တဈခုမဟုတျ တဈခုကတော့ စိတျတိုငျးမကဖြွဈနရေတဲ့အခါ ကိုယျ့ဘာသာ အိမျမှာ လုပျတာအကောငျးဆုံးလို့ ကွှေးကွျောပွီး ဟိုစမျးဒီစမျးလုပျရငျးကနေ အလှယျဆုံးနညျးနဲ့ အောငျမွငျသှားတယျပေါ့နျော။
အာ့ကွောငျ့ အစားကောငျးစားရရငျ ကိုယျခဈြတဲ့လူတှကေို သတိရတယျဆိုသလို ဒိနျခဉျြကွိုကျတဲ့ ယောငျးယောငျးလေးတို့အတှကျ နှငျးရဲ့ဒိနျခဉျြလုပျနညျးနဲ့ ထနျးလကျြကြိုနညျးကို ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျလို့။
နှားနို့ (၅၀) သား
Related Article >>> အိမျမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖကျထုပျလုပျစားကွမယျ…
အရငျဆုံး နှားနို့ ၅၀ သားကို အနံ့မှေးလာတဲ့အထိ နာနာကြိုလိုကျပါ။ ကြိုနတေဲ့အခြိနျမှာ ဆားအနညျးငယျထညျ့ထားပွီး နာနာမှပေေးပါ။ နှားနို့အနံ့ မှေးလာတဲ့အခါ မီးဖိုပျေါက ခပြွီး မလိုငျတကျလာတဲ့အထိ ခဏအအေးခံထားပေးပါ။ နညျးနညျးအေးသှားတဲ့အခါ နှားနို့ကိုခှကျတဈခှကျစီထဲ ခှဲထညျ့ပွီး အပျေါယံမှာ ဒိနျခဉျြတဈဇှနျးစီ လိုကျထညျ့ပေးပါ။ ထညျ့ပွီးတာနဲ့ ဒိနျခဉျြတှကေို နှားနို့ထဲ ပြံ့သှားအောငျ ခပျနာနာလေး ခေါကျပွီး မှပေေးပါ။ ပွီးရငျတော့ အခနျးအပူခြိနျထဲမှာပဲ အအေးခံထားလိုကျပါ။
၄ နာရီလောကျကွာရငျတော့ ဒိနျခဉျြလေးခဲသှားပွီး သုံးဆောငျလို့ရပါပွီ။ နှငျးကတော့ ခပျဆိမျ့ဆိမျ့နဲ့ နှားနို့အရသာအရမျး ပြောကျမသှားတဲ့ ဒိနျခဉျြလေးကွိုကျလို့ ၄ နာရီလောကျပဲ ထားတာ။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့ခဉျြခဉျြလေးသောကျခငျြရငျတော့ တဈညလောကျထားပေါ့နျော။ ပွီးတာနဲ့ ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ပွီး ၃ ရကျလောကျထားပွီး သောကျလို့ရပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ ဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ ပဈြနှဈနတေဲ့ ဒိနျခဉျြလေး ရပွီပေါ့နျော။ အသီးကွိုကျတတျရငျလညျး အပျေါကအသီးလေးတှတေငျပွီး စားလို့ရပါတယျ။
ကဲ.. ဒိနျခဉျြပွီးသှားပွီဆိုရငျ ထနျးလကျြဘကျ လှညျ့ကွရအောငျ..
ထနျးလကျြ ကြိုဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှကေတော့ ထနျးလကျြ နဲ့ ရပေါပဲ။
ထနျးလကျြ ၅ ခဲကို ရမွေုပျရုံထညျ့ပွီး မီးအေးအေးနဲ့ လုံးဝပဈြသှားတဲ့အထိ ခပျနာနာလေးကြိုလိုကျပါ။ ကြိုနတေဲ့ တောကျလြှောကျမှာလညျး မှပေေးဖို့ မမနေဲ့နျော။ (ဘာလို့လဲဆိုတော့ နှငျးကွုံခဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံအရ မီးပွငျးရငျ တူးတတျပွီး မမှပေေးရငျလညျး အိုးကပျတတျလို့ပါ။) ၁၅ မိနဈလောကျသခြော ကြိုပွီးရငျတော့ ရပါပွီ။
Related Article >>> ဒိနျခဉျြကိုဒီအတိုငျးမစားခငျြရငျ
ကဲ ဘယျလိုလဲ? လှယျတယျမလား။ အဲဒီနညျးက နှငျးတို့တရုတျတနျးရဲ့ နာမညျကွီးဒိနျခဉျြဆိုငျကနေ ခငျအောငျပေါငျးပွီး အဈအောကျမေးထားရတဲ့ နညျးလမျးပါ။ (ငိငိ အိုငျ အကွံပိုငျတယျမလား :P) ထနျးလကျြကြိုနညျးကတော့ ကိုယျ့ဘာသာရှာရတာပေါ့နေျာ့။
ဆိုတော့ နောကျတဈခါလုပျရငျ အပွငျကနဝေယျစရာမလိုအောငျ ဒီလုပျထားတဲ့ဒိနျခဉျြထဲကပဲ ခှကျတဈဝကျစာလောကျ နှုတျပွီး ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ သိမျးထားလိုကျပါ။ အကယျ၍ ဒိနျခဉျြက တအားပဈြနတေယျဆိုရငျလညျး ရလေေးနညျးနညျးရောပွီး သောကျပေါ့။ ပွီးတော့ ဘာဓာတုပစ်စညျးမှလညျး မပါတာမို့ အိမျမှာရှိတဲ့ ကလေးတှနေဲ့ ယောငျးရဲ့ မိဘဘိုးဖှားတှလေညျး အန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့ သောကျလို့ရပါတယျလို့။
ယောငျးတို့ အိမျမှာလုပျစားဖွဈခဲ့ရငျလညျး အဆငျပွမေပွေ ပွနျပွောပေးခဲ့ဦးနျော။
Tags: delicious, easy, Homemade, quick, yoghurt
Khaine Zar Lin March 8, 2019
အိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူ ကျင့်လို့ရတဲ့ ယောဂကျင့်စဉ် (၅) မျိုး
Hnin Ei Oo March 4, 2019
Myat Moe February 4, 2019
အရသာအဆန်းလေးတွေ မြည်းစမ်းချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် သခွားသီးအစာသွပ်ချက်နည်း
Khaine Zar Lin January 21, 2019